Eddie Nketiah Oo Digniin U Diray Xiddiga Arsenal Doonayso Ee Gabriel Jesus - Laacib
HomeWararka CiyaarahaEddie Nketiah Oo Digniin U Diray Xiddiga Arsenal Doonayso Ee Gabriel Jesus
Eddie Nketiah Oo Digniin U Diray Xiddiga Arsenal Doonayso Ee Gabriel Jesus
Weeraryahanka da’da yar ee Arsenal ee Eddie Nketiah ayaa digniin u diray weeraryahanka reer Brazil ee Gabriel Jesus oo la sheegay in ay Arsenal qarka u saaran tahay heshiiskiisa, kaas oo la filayo inay afka hore ku tartami doonaan laacibkan.
Arsenal oo lix bilood gudahood ku lumisay Pierre-Emerick Aubameyang iyo Alexandre Lacazette ayaa waxay doonaysa in ay Manchester City kala soo wareegto Gabriel Jesus si uu u noqdo weeraryahankooda koowaad, waxaase lagu xidhay inay bixiyaan £50 milyan oo Gini.
Waxa kale oo ay Arsenal ku qancisay inuu heshiis cusub saxeexo weeraryahanka da’da yar ee reer England ee Eddie Nketiah, loona xidhay No14, ayaa waxa uu u sheegay Jesus in uu u diyaar-garoobo tartan adag, waxaanu yidhi: “Koox kasta waxay u baahan tahay koox tartamaysa. Kooxduna mar walba way is xoojinaysaa.
“Waxay kordhiyeen heshiiskayga, waxaana jirta sabab ay sidaa u sameeyeen. Cid kasta oo timaadda, waa in aad u diyaar-garoowdo tartan. Waxa aad helaysaa soo dhoweyn, laakiin waa in aad booskaaga u dagaallanto oo aad tartanto.”
Nketiah ayaa xilli ciyaareedkii tegay waxa uu door weyn ka qaatay Arsenal inkasta oo ay waqti dambe lumiyeen booskoodii kaalinta afraad oo ay in muddo ah soo xajisanayeen, waxaana uu min laba gool ka dhaliyey Nketiah kooxaha Chelsea iyo Leeds United.
23 jirkan ayaa isugeyn xilli ciyaareedkii tegay u dhaliyey 10 gool, taas oo ka dhigan in 113 daqiiqadood oo kasta uu hal gool dhaliyey.
Jesus oo isaguna inta badan kursiga kaydka ee Manchester City ku jiray xilli ciyaareedkii tegay ayaa waxa uu dhaliyey 13 gool oo dhamaan tartamada ah, waxaanu ku daray 11 kale oo uu caawiye ka noqday, isaga oo 107 daqiiqadood oo kasta ku lug yeeshay hal gool.